बाल्यकालदेखि नै हामीलाई सफल हुनुछ भने बिहान छिट्टै उठ भनिन्छ ।
बिहान उठ्दा काम धेरै हुन्छ । सेलिब्रेटीहरु र ठूला ठूला कम्पनीका प्रमुखहरु पनि यस्तै गर्छन् ।
यस्तो पनि भनिन्छ कि बिहान चाँडै उठ्दा स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ । तपाईं खुसी रहनुहुन्छ र जीवनमाथि तपाईंको नियन्त्रण रहन्छ ।
यी राम्रा कुराहरु त होलान् तर, बिहान उठ्दासाथ जादुमयी तरिकाले केही हुँदैनन् । न यसरी समय व्यवस्थापनको समस्या समाधान नै हुन्छ । कतिपय मानिसलाई त यसको उल्टो असर पनि पर्न सक्छ ।
असल त त्यस्तो जीवनशैली रोज्दा हुन्छ जुन तपाईंको अनुकूल हुन्छ । यहाँ बीबीसी हिन्दीका लागि ब्रायन लुफकिनले तयार पारेको केही सर्वकालीक टिप्स प्रस्तुत गरिएको छ, जसले तपाईंको लागि बिहान उठ्ने समय तय गर्नको लागि सहयोग गर्नेछन् ।
छिटो उठ्नुको फाइदा के हुन् ?
यसका कयौं फाइदा हुन सक्छन्, कम से कम उनीहरुको नजरमा जो बिहान चाँढै उठ्छन् ।
कयौं मानिस भन्छन् कि बिहान ध्यान भड्काउने चिजहरु कम हुन्छन् । घरमा बच्चा र अरु मानिसहरु पनि सुतिरहेका हुन्छन् । त्यतिबेला सन्देश र इमेल पनि कम नै आउँछन् ।
एप्पलका सीईओ टिम कुक भन्ने गर्दथे, ‘म बिहानको पौन चार बजे जग उठ्छु र क्यालिफोर्नियामा बसेर पनि पूर्वी तटमा रहने आफ्ना साथीबाट पहिलो इमेल चेक गर्न सुरु गर्दछु ।’
क्यालिफोर्नियामा जब बिहानको ३ः४५ बज्छ तब अमेरिकाको पूर्वी तटमा ६ः४५ बजेको हुन्छ ।
ओप्रा विनफ्रे हरेक दिन बिहान ६ बजेर २ मिनेट जाँदा ब्युँझिन्छिन् । उनी ध्यान र व्यायाम गरेपछि बिहान ९ बजेबाट काम सुरु गर्छिन् ।
हलिउड स्टार मार्क वोलबर्ग सबैभन्दा बढी हैरान पार्छन् । उनी त रातिको साढे दुई बजे नै ब्युँझन्छन् । कसरत गर्छन् । गल्फ खेल्छन, प्रार्थना गर्छन् र माइनस १०० डिग्री तापक्रममा केही समय बिताएर नुहाउँछन् ।
केही अध्ययनले बिहान उठ्नु र सफलता पाउनु सम्बन्धित भएको पनि पाइएको छ ।
जो मानिस बिहान चाँडै उठ्छ, उसको पारम्परिक कर्पोरेट शेड्यूलसँग राम्रो तालमेल रहन्छ र ऊ सक्रिय व्यक्तिमा पर्छ ।
विद्लाय-क्याम्पसमा उसको ग्रेड राम्रो हुनसक्छ र नोकरीमा पनि उसले राम्रै तलब पाउन सक्छ ।
यदि तपाईं प्राकृतिक रुपबाटै बिहान चाँडै ब्युँझनुहुन्न भने तपाईंले केही नयाँ रणनीति तय गर्न सक्नुहुन्छ ।
बिहान कसरत गर्दा र जतिसक्छ छिटो सूर्यको किरणसँग साक्षात्कार गर्दा शरीरको मेटाबोलिज्म बढ्छ र शरीरलाई न्यानो राख्नमा मद्दत मिल्छ, जसले शरीरमा फूर्ति पनि आउँछ ।
तर अलार्म घडी वा मोबाइलको मद्दतबाट ब्युँझनु सबैको लागि फाइदाजनक नहुनसक्छ ।
यदि तपाईं बिहानको लागि उपयुक्त व्यक्ति हुनुहुन्न तर जबरजस्ती त्यस्तो बन्न प्रयास गर्नुहुन्छ भने त्यसले तपाईंलाई हानी पुर्‍याउन पनि सक्छ ।
के सबैले बिहान चाँडै उठ्नुपर्छ ?
त्यस्तो होइन । वास्तवमा, छिटो उठ्नाले तपाईं बढी उत्पादनशील बन्न सक्नुहुन्छ वा नबन्न पनि सक्नुहुन्छ । यसको निर्धारण तपाईंमा भएको जिनहरुले गर्छन् ।
कयौं अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ कि केही मानिस जैविक रुपबाट बिहान धेरै सजग रहन्छ र केही मानिसमा यस्तो सतर्कता राति बढी हुन्छ । यस्तो पनि सम्भव हुन सक्छ कि तपाईंको सतर्कता र दिमागी दक्षता मध्यान्हपछि धेरै हुन्छ ।
नेचर कम्युनिकेशन्स नामक जर्नलमा हालसालै छापिएको एक अध्ययनले यसको पुष्टि गरेको छ ।
सात लाखभन्दा बढी मानिसको आंकडालाई हेरेपछि शोधकर्ताहरुले ३५० भन्दा बढी आनुवंशिक कारकलाई पहिचान गरे, जसले कोही व्यक्ति बिहान त कोही साँझमा ऊर्जावान महसुस गर्नेकुरा तय गर्छ ।
नमूनाको आकारको आधारमा यो आफ्नोतर्फको सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान हो । यद्यपि, यसको निष्कर्षलाई पुष्टि गर्न अरु पनि शोधको जरुरी पर्छ ।
यसरी यदि तपाईं प्राकृतिक रुपबाटै बिहानको समयमा ऊर्जावान महसुस गर्नुहुन्न र फेरिपनि बिहानै उठ्न खोज्नुहुन्छ भने हुनसक्छ यसले तपाईंलाई नोक्सान गर्छ ।
केही मानिसका लागि छिटै उठ्नका लागि निजी कारण हुनसक्छन् ।
म्यानचेस्टर युनिभर्सिटीमा वर्क साइकोलोजीका प्रोफेसर मैरिलिन डेविडसन भन्छन्, ‘छिटो उठ्ने र काम सुरु गर्नुका पछाडि अर्को कारण पनि हुनसक्छ, जस्तो कि उत्साह र नोकरीबाट सन्तुष्टि ।
साना बच्चाका आमा-बुवा र गैर-परम्परागत घन्टा काम गर्ने श्रमिकका लागि यस्ता कुराको विकल्प हुँदैन कि उनीहरुले कतिबेला आफ्नो दैनिकी सुरु गर्ने र कतिबेला उठ्ने ।
मुख्य कुरा यो हो कि केवल छिटो उठेर अफिसमा रातारात सफलता मिल्दैन ।
वास्तवमा यो त त्यही व्यक्तिमा भर पर्छ र छिटो उठ्नुको नकरात्मक नतिजा पनि निस्कन सक्छ ।
के बिहान उठ्दा नोक्सान पनि हुन्छ ?
हजुर । यदि तपाईं सामान्य अवस्थाभन्दा छिटो उठ्ने मानिस होइन र उत्पादकता बढाउनका लागि यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ यसले तपाईंलाई हानी पनि पुर्‍याउन सक्छ ।
अमेरिकामा जोन हपकिन्स युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफेसर रैचेल सलास निद्रासँग सम्बन्धित विकारका विशेषज्ञ हुन् ।
उनी भन्छन्, ‘कुनै ‘ठूला मान्छे’लाई देखेर यदि तपाईं हप्तामा दुई दिन बिहान ५ बजे उठ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईं आफ्नो शरीरको साथ खेलवाड गर्दै हुनुहुन्छ ।
पूरै रात राम्रोसँग सुत्नु र हरेक दिन निश्चित समयमा सुत्नु र समयै उठ्नु, यी दुवै महत्वपूर्ण कुरा हुन् ।
योभन्दा पनि बढी हानिकारक हुन्छ बिहान छिटो उठ्नको लागि निद्रामा कटौती । निद्रामा कटौतीको मतलब हो यसका नकरात्मक प्रभावलाई निम्ता दिनु ।
यसले एकाग्रता घट्न सक्छ, तौल बढ्न सक्छ, साथसाथै बेचैनी पनि बढ्छ । मुटुको रोग र उच्च रक्तचापको खतरा पनि हुन्छ ।
त्यसैले यदि छिट्टै उठ्नको लागि तपाईंले निद्रामा कटौती गर्नु पर्छ भने त्यसो नगर्नुस् ।
सलासलाई भेट्न कयौं बिरामी आउँछन्, जसले जवानी अवस्थामा निद्रा कटौती गरेका थिए । जब उनीहरुको उमेर छिप्पिँदै गयो र उनीहरुको बच्चा भए तब समस्या हुन थाल्यो ।
बेलायतका ल्यूटनमा बेडफोर्डशायर युनिभर्सिटीका प्रोफेसर गेल किनम्यान भन्छन्, ‘यदि तपाईं बिहान चाँडै उठ्नुहुन्छ भने तपाईंको काम छिट्टै सक्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कुनै वास्तविक फाइदा हुँदैन ।’
किनम्यानलाई लाग्छ, ‘उच्च तहका व्यापारीहरु जो बिहानै ब्युँझन्छन्, अबेलासम्म अफिसमा रहन्छन् वा राति पनि इमेलमा उपलब्ध हुन्छन्, उनीहरुले आफ्नै नोक्सान गरिरहेका हुन्छन् ।
बिहान छिटो उठ्नेबारेमा गफ दिनु एकदमै नराम्रो हुनसक्छ ।
न्यूयोर्क टाइम्सले हालसालै ‘Performative Workaholism’ नामक शब्दको कल्पना गरेका छन् ।
यो उनीहरुको लागि हो जो छिट्टै उठ्ने र अबेलासम्म काम गर्ने गफ फलाक्छन् । वास्तवमा, यो असल उदाहरण होइन ।
किनम्यान भन्छन्, ‘सीईओ कर्मचारीका लागि रोल मोडल हुन्छन् । उनको यस्तो व्यवहारलाई उपयुक्तरुपमा देख्नु गैरजिम्मेवारपन हो ।’
अब तपाईंले के गर्नुपर्छ ?
विशेषज्ञहरु भन्छन् कि अभ्यास गर्नुहोस् तर कसैले भनेअनुसार होइन । तपाईं आफैंले पत्ता लगाउनुपर्छ तपाईंको लागि सबैभन्दा राम्रो के हो ? सायद, छिट्टै उठ्नु तपाईंको लागि राम्रो नहुन सक्छ ।
ध्यान दिनुहोस्, तपाईं कतिबेला थकाई महसुस गर्नुहुन्छ र कतिबेला ऊर्जावान रहनुहुन्छ ।
बिदाको बेला ध्यान दिनुपर्छ तपाईंलाई कतिबेला निद्रा आउँछ र कतिबेला तपाईंको निद्रा खुल्छ । आफ्नो दिनचर्यालाई तदनुरुप ढाल्नु उपयुक्त हुन्छ श्र
यसरी तपाईं आफ्नो प्राकृतिक ऊर्जाको अधिकांश भागलाई उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
कुरा कुनै अफिस वा समूहको हो भने विशेषज्ञको फरक सुझाव छ । सबैको बानीव्यवहार हेरेर बुझेर उनीहरुले सबैभन्दा राम्रो काम गर्न सक्नेगरी समायोजना गर्नु यस्तो अवस्थामा उपयुक्त हुन्छ ।
न्यूयोर्क युनिभर्सिटीमा व्यवस्थापन सञ्चार कार्यक्रमकी निर्देशक सुसैन स्टेलिकको सुझाव छ कि कार्यालय वा समूहमा “Appreciative Inquiry” प्रविधिको उपयोग गर्नु उत्तम हुन्छ ।
यसमा कुनै परियोजनाको सुरुवातमा नै सबै मानिस बसेर आफ्नो निजी आवश्यकता, दिनचर्या र रुचिमाथि चर्चा गर्छन् ताकि समूहका सदस्यहरुको विशेषताहरुलाई समायोजित गर्न सकियोस् ।
उदाहरणका लागि, यदि कसैको बच्चा सानै छ र उनलाई बिहान ५ बजे उठ्नुपर्छ र बच्चालाई डे केयरमा लैजानुपर्छ भने उनी अबेलासम्म बस्न सक्दिनन् । समूहमा उनको खास विशेषता समायोजित हुनु अत्यावश्यक हुन्छ ।
यदि समूह नेताको स्वभाव नरम छ भने बिहान छिटो उठेर काम गर्नेलाई बेलुका छिट्टै घर पठाइदिन सक्छ ।
यसरी काम गर्ने मानिसलाई छिट्टै उठ्नु फाइदाजनक हुन्छ र थकावटबाट पनि बच्न सकिन्छ ।
जसको लागि बिहान उठ्नु फाइदाजनक हुन्छ ऊ छिटो उठ्नु फाइदाजनक हुन्छ तर उत्पादकता बढाउने भ्रममा परेर सबैले मनमानी ढंगले छिट्टै ब्युँझनुको फाइदा छैन ।
आफ्नो निद्राको बानीलाई तपाईं आफैंले चिन्नु जरुरी हुन्छ । तपाईंले दिन वा रातमा कतिबेला बढी ऊर्जाशील महसुस गर्नुहुन्छ थाहा पाउनुहोस् । सबैभन्दा मुख्य कुरा यो हो कि चाहिनेजति सुत्नुहोस् । निद्रा कटौती नगर्नुहोस् ।
सूर्य उदाउनु अगाडि नै ब्यँझनुहुन्छ ताकि तपाईंको आइडल मानिसहरु त्यसैगर्छन्, यो कुनै स्मार्ट तरिका होइन । यसरी जिउनुहोस् जुन तपाईंलाई गज्जब लाग्छ र तपाईंको लागि फाइदाजनक छ ।
किनम्यान भन्छन्, ‘यस्तो पटक्कै नगर्नुहोस्, जबसम्म तपाईं बिहान छिट्टो उठ्दा आनन्दित हुनुहुन्न ।’
(बीबीसी क्यापिटलबाट अनुदित)
चिसो मौसममा मुटुका बिरामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
‘ज्याक मा’को सफलताका १० सुत्र, जसले तपाईंलाई उत्साह दिनसक्छ
योगा गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी